Iingcebiso ze-SEO zesitishi sakho se-YouTube
NguRob Ciampa, Theresa Go, Matt Ciampa, uRich Murphy
Usenokuba sele uqhelana nomxholo we ukufunyanwa -Ukunceda i-YouTube ifumane umxholo wakho phambi kwababukeli abafanelekileyo ngokusebenzisa iingcebiso kunye nokhangelo ukuze babukele eyakho umxholo kunokuba ungomnye umntu. Nangona ixesha lokubukela liyinxalenye ebalulekileyo yenjini yengcebiso ye-YouTube, ividiyo iimethadatha -Isihloko sayo, inkcazo, kunye neethegi- zidlala indima ebalulekileyo ekufumaneni ividiyo kuqala.
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela ividiyo ( ividiyo ye-SEO, Ngokufutshane) konke kukuxelela iYouTube malunga nevidiyo yakho. Kwi-SEO yemveli yewebhu, iinjini zokukhangela ezinje ngeGoogle, Bing, kunye neYahoo! uza kuhlalutya umxholo okwisiza sakho, ufumanise ukuba yintoni ebalulekileyo, kwaye emva koko unikezele umxholo wakho kwezona zifunekayo. Ixesha elingaphezulu, ezi injini zokukhangela zifakelwe kwizinto ezinje ngamakhonkco, ukwabelana, kunye nokucofa ukuze uqiniseke ukuba umxholo othile othandwayo uphele kangakanani kwiwebhu.
I-YouTube ayisebenzi njengewebhu ye-SEO kuba ayinakho (okwangoku) ukubukela umxholo wakho ukumisela ukuba ividiyo yakho imalunga nantoni. Endaweni yoko, kufuneka ixhomekeke kwimethadatha yakho kunye nendlela uluntu olusabela ngayo ngexesha lokubukela, izabelo kwimidiya yoluntu, kunye namakhonkco afakelwe ividiyo kwiisayithi zangaphandle.
Kulula kakhulu ukufumana ividiyo yakho ye-SEO indlu ngokulandelelana ngaphambili kunokuba ujongane nayo emva kokuba upapashe wonke umxholo wakho.
Yintoni kanye kanye ekuthethwa ngayo ulungiselelo phakathi ulungiselelo lweinjini yokukhangela? Ukulungiswa Imalunga nengqondo kunye nocwangco lokubeka inkcazo efanelekileyo yevidiyo yakho ukuze
I-YouTube iyayiqonda into ekuyo malunga nomxholo wakho ukuze ibonelele ividiyo yakho kwezona zikhangeli zifanelekileyo
Iinjini zokukhangela ezinje ngeGoogle, Bing, kunye neYahoo! qonda umxholo wakho kwaye ke ukwimeko yokongeza iividiyo zakho kumaphepha eziphumo zokukhangela kunye nomxholo wewebhu
Ababukeli kunokwenzeka ukuba bacofe umxholo wakho xa kuthelekiswa nezinye iziphumo zophando ezibonelelweyo
Ezi ziinjongo ofuna ukufikelela kuzo.
Iingcebiso ze-SEO zezihloko zevidiyo ze-YouTube
Isihloko sevidiyo sesona siqwenga semethadatha sibalulekileyo osenzayo. Kubalulekile njengoko isihloko sikwiYouTube kunye neenjini eziphambili zokukhangela, kuya kufuneka uqinisekise ukuba iyasebenza nakubantu. Ingxaki kukuba ayinakubonakala ngokungathi uzama nzima ukubamba ingqalelo yabantu.
Izihloko ezibaxwayo, ezingachanekanga, ezinje ngekhe ukholelwe ukuba kwenzeka ntoni kwiikati ezili-12 kule vidiyo, zinokukwenza ucofe ngakumbi, kodwa iinjini zokukhangela azizukuluma kwaye baya kuwuhoya umxholo wakho. Kulumkele ukuphefumla amagama anje ngee-epic ezininzi okanye uvuthele ingqondo yakho.
Betha ibhalansi phakathi kokutsala abantu kunye nokutsala iinjini zokukhangela xa usenza kwaye ulungiselela isihloko sevidiyo.
Isihloko sakho sivela kwiindawo ezininzi:
Kwiphepha lokubukela phantsi kwevidiyo eyiyo
KwiGoogle, iBing, kunye neYahoo! ukukhangela
Njengenxalenye yoluhlu lokudlala
Ngaphantsi kweYouTube yacebisa iividiyo
Ukukhetha isihloko akukho nzima, kodwa kufuneka ube ngendlela ethile.
Nangona ungasebenzisa oonobumba abali-100 kwisihloko sevidiyo, ngabalinganiswa abangama-70 kuphela ababonakala kwiziphumo zokukhangela kwikhompyuter ye-desktop, nangona ezinye izixhobo eziphathwayo zibonisa malunga ne-40 kuphela, ke kuya kufuneka ubala abalinganiswa. Izihloko kwiividiyo ezicetyiswayo ziya kuncitshiswa. Unokwenza isihloko eside, kodwa kubonakala kuphela kwiphepha leWatch. Injongo yevidiyo ye-SEO kukutsala ababukeli kule vidiyo kwindawo yokuqala. Ukunciphisa umda ngesihloko akulunganga nokuba kungaphazamisa ukukhangela kwealgorithm.
Sebenzisa le ndlela ilandelayo ukukhetha isihloko sevidiyo yakho yeYouTube:
Chonga amagama aphambili.Angamagama abalulekileyo akhangelwa ngabantu. Qiniseka ukuba bayinxalenye yomxholo wevidiyo kunye neminye imethadatha ehambelana nevidiyo yakho, enjengethegi kunye neenkalo zeNkcazo. Ukuba usebenzela i-Acme Electric kwaye uthengisa i-oven entsha ye-Z500, amagama akho aphambili aya kubandakanya Acme Umbane, Z500, kwaye ve Ukuhanjiswa oven
Yongeza ibinzana elichazayo kwisihloko Amagama akho aphambili awodwa akanokwanela. Qinisekisa ukuba kutheni ababukeli bakho beya kukhangela imveliso yakho okanye ividiyo yakho. Banokufuna imiyalelo yokufaka okanye uphononongo lwemveliso, umzekelo. Imigaqo enjengokufaka kunye nokuphononongwa kwemveliso kukunceda kukhangelo nakwimbono.
Hambisa amagama angundoqo okubeka uphawu ukuphela kwesihloko.Ababukeli baya kukhangela iimveliso zakho, kodwa kufuneka babone ulwazi oluchazayo kuqala.
Ukuba ividiyo yakho yeYouTube iyinxalenye yothotho, faka nenombolo yesiqendu ekupheleni kwesihloko Nokuba iividiyo zakho ziyinxalenye yoluhlu lokudlala, ababukeli bakho banokugqibela ngokukhangela ngokwahlukeneyo, ke yenza kube lula kwaye kusengqiqweni ukuba bafumane enye isiqendu.
Faka amagama aphambili esihloko kwithegi kunye nenkcazo yemethadatha.
Ngaphambi kokuba ulayishe nantoni na kwiYouTube, kuhle ukuziqamba igama kwakhona kwifayile yesihloko emele ngokuchanekileyo umxholo wayo. I-YouTube igcina isihloko sefayile yereferensi kwividiyo nokuba ungaphindaphinda kangakanani ukutshintsha isihloko.
Imiphumo emibi ye-lantis insulin
Iingcebiso ze-SEO zeenkcazo zevidiyo zeYouTube
Kuya kufuneka uyisebenzise kakuhle intsimi yeempawu ezingama-5,000 ezibonelelwa yi-YouTube ukuchaza ividiyo yakho. Yindawo entle yokongeza iinkcukacha malunga nevidiyo yakho kuphela kodwa kunye nejelo lakho, kunye namakhonkco ezinye iividiyo, imirhumo, ezinye iindlela kunye newebhusayithi. Ngamanye amagama, yigolide yemayini kuzo zombini iimethadatha kunye nesikhokelo somsebenzisi. Ababukeli abayikhathaleleyo ividiyo yakho baya kuyifunda inkcazo, ke yenze ukuba ibalungele ixesha labo.
Indawo eyakhiwe kakuhle yeNgcaciso yeYouTube.
Inkcazo yevidiyo yeYouTube kufanele
Chaza ngokweenkcukacha ezingakumbi malunga nevidiyo kunye nejelo lakho.
Yandisa Amava ombukeli ngokunika iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nento eboniswe kwividiyo. Umzekelo, ukuba unayo ividiyo ekuphekeni, inkalo yeNkcazo yindawo entle yokubandakanya ikopi yeresiphi.
Qalisa umbukeli ukwenza into. Oko kunokubandakanya ukubukela enye ividiyo, ukuthenga, ukuxhasa injongo yakho kunye nokunye.
Umtsalane abantu ukuba bajonge. Isibini sokuqala semigca yenkcazo siyabonakala kwiziphumo zokukhangela, ke kuya kufuneka ubhale umxholo onyanzelisayo- kunye nomxholo ofanelekileyo ukuze umsebenzisi ngandlela thile athathe inyathelo elilandelayo lokucofa kunye nokujonga. Kuyinyani nakwiphepha lokubukela, apho izivakalisi zokuqala ezivela phantsi kwevidiyo, zinyanzela umbukeli (uyathemba!) Ukuba abukele.
Uncedo ekufumaneni. Inkcazo enkulu kufuneka ibandakanye amakhulu amagama aphambili anceda ukukhangela. Qiniseka ukuba usebenzisa ezihambelana nevidiyo.
Inkalo yenkcazo ayisiyondawo yokubhalwa kwevidiyo yakho. Cacisa kwaye ucacise, kodwa yenze ibe nomdla ngokwaneleyo ukuba abantu baya kufuna ukuyifunda.
Ngalo lonke ixesha jonga ukuba loluphi ulwazi olubonakalayo kwiziphumo zophando ngokwazi kakuhle ukuba zeziphi izixhobo ezisebenzisa abaphulaphuli bakho ukukhangela. Imigca embalwa yokuqala yenkcazo iyavela kukhangelo lwe desktop, ngelixa kungekho datha yenkcazo ichazwe ngoku kukhangelo lwesixhobo esiphathwayo.
Amagama amabini amadala asuka kwintengiso kunye nentengiso asasebenza ngokufanelekileyo kwicandelo lenkcazo ye-YouTube yanamhlanje: ngaphezulu kwesibaya nangaphantsi kwesibaya. Xa abantu babedla ngokufumana iileta ezisongiweyo okanye izibhengezo, babehlala bejonge phezulu, eyayiphezulu ngentla kwesibaya. Ukuba umxholo ubunyanzelisa, bebeyifunda yonke ingezantsi komqolo. Xa ababukeli bebukele ividiyo yakho, bakwabona nenxalenye yokuqala yenkcazo yayo. Ukuba inkcazo iyanyanzelisa, bacofa iKhonkco elingakumbi ukuze babone ukuba yintoni engaphantsi kwesibaya. Yenza okungaphezulu kwesibalo kubalo lwenkcazo yevidiyo.
Indawo yenkcazo kufuneka ibe ne-shortlinks eyaneleyo yokuphendula nayiphi na imibuzo ababukeli bakho abanokuba nayo malunga nevidiyo yakho, ijelo lakho kunye neshishini lakho. Iphepha elimalunga nesitishi sakho kufuneka liqulathe amakhonkco agcwalisa ijelo lakho. Kulungile ukuphinda ezinye zezi zixhumanisi kwinkcazo yevidiyo ngokunjalo. Iifutshane kumhlaba wenkcazo unokukhomba
Ijelo lakho leYouTube
Iindawo zokuzonwabisa ezinje nge-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, iPinterest, okanye i-Instagram
Faka ikhonkco elinye kuphela kumhlathi wokuqala ukuba ufuna ababukeli baphelele kwenye indawo. Bandakanya lonke unxibelelwano olufanelekileyo lwasentlalweni okanye iphepha lekhonkco lemveliso kumqolo wesibini okanye osezantsi wenkcazo.
Sukuyila ifildi yenkcazo eyenziwe ibenakho ngokupheleleyo ividiyo nganye. Beka ndawonye isakhelo esingaguquguqukiyo okanye itemplate ebandakanya ulwazi olunokuphindwa, njengolwazi lokurhuma, amakhonkco eendaba ezentlalo, ishedyuli yenkqubo kunye nolwazi lokunxibelelana. Yenza kuphela idatha ekwisakhelo sakho enxulumene nevidiyo uqobo. Gcina yonke enye into ingqinelane. Abaphulaphuli bakho baya kuluxabisa ulungelelwaniso lwentsimi yakho ngokunjalo.
Wonke umntu uyayithiya i-imeyile engafunekiyo-iintengiso ezingacelwanga zizaliswe ngamagama angaphezulu nangaphezulu. Ukuba inkcazo iyavakala kuyo yonke i-spammy, uya kucaphukisa ukusabela okungalunganga. Endaweni yoko, zama ukuba nolwazi ngokusebenzisa amagama amaninzi achazayo kunye neefutshane ezifanelekileyo.
Iingcebiso ze-SEO zeethegi kwividiyo yakho yeYouTube
Iimpawu ngamagama aphambili achazayo okanye amabinzana amafutshane abonisa ividiyo yakho. Zisetyenziswa ziinjini zokukhangela ukunceda ababukeli bafumane ividiyo yakho. Iimpawu zikwadlala indima ebalulekileyo ekuncedeni iYouTube ukuba yenze izindululo malunga nevidiyo. (Inkcazo yakho inamagama aphambili, kodwa iithegi zisetyenziswa yiYouTube ukunceda ukwahlula ividiyo yakho.)
I-YouTube inyanzelisa umda wabalinganiswa abangama-500 kwicandelo lonke lethegi. Ithegi inokuqulatha igama elinye okanye nangaphezulu, kodwa ithegi nganye ayinakuba ngaphezu kwamagama angama-30 ubude.
Ungalindela ntoni emva kokuba implanon isusiwe
Ngaphandle kokungena nzulu kakhulu kwimathematics, ungaphelela kwigumbi leethegi ezili-10 ukuya kwezi-30. Sebenzisa ezininzi kangangoko unakho.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokwenza iithegi zevidiyo zakho zeYouTube?
Cinga ngokubanzi. Wonke umntu ukhangela ngokwahlukileyo-abanye basebenzisa amagama abanzi anje eziko, ngelixa abanye besebenzisa I-acme Electric Z500 i-oven yokuhambisa umbane. Sebenzisa zombini.
Khetha izithethantonye. Nangona ungasebenzisa eziko kuphela kwinkcazo nakwividiyo, kulungile ukusebenzisa igama isitovu kwiithegi zakho.
Yongeza ithegi yesenzo. Ngokuqinisekileyo, abantu banokukhangela ividiyo malunga ne-oven ye-Acme Electric Z500. Cinga ngamagama afanelekileyo, anje uphononongo lwemveliso, indlela yokufaka, kwaye ukucoca njani Khetha enye ejikeleze umxholo wevidiyo.
Hlanganisa kwaye uqhekeze amagama aphambili. Ulwimi kunye nabantu abachanekanga, ke thatha ingqalelo kwaye usebenzise amagama aphambili, njengakwi Pheka ngaphezulu kwaye
Iimpawu zinokuguqulwa. Qiniseka ukuba zibonisa umxholo womxholo.
Sukusebenzisa iitoni zamagama angabalulekanga angabalulekanga ukutsala ababukeli kunye nokuphucula uluhlu lwakho lokukhangela. Oku kuyakwenzakalisa isikhundla sakho sokukhangela njengoko i-YouTube iya kucinga ukuba ngogaxekile. Kunye nababukeli banokuyijonga ividiyo yakho ukuba abayifumani.
Iingcebiso ze-SEO zezithonjana zeYouTube
Izithonjana zizifoto ezibonakalayo zevidiyo yakho, ezifana neposta yemovie. Banefuthe elimangalisayo kwinqanaba lokujonga ividiyo, ke khetha elungileyo. Izithonjana ngokungagqibekanga zikhethwe yiYouTube- izakhelo ezintathu ezikhethiweyo ukusuka ekuqaleni, embindini nasekupheleni kwevidiyo yakho. Kodwa unokwenza i-thumbnail yesiko kwividiyo nganye usebenzisa i-Photoshop okanye nayiphi na inkqubo yokuhlela ifoto.
Izithonjana zevidiyo ezisebenzayo zeYouTube.
Ukuba uthatha isigqibo soku yenza izithonjana zesiko , khetha i-thumbnail ebonisa umxholo wevidiyo. Izithonjana ziboniswa kwezi ndawo zilandelayo:
Gcina ezi zinto ziphambili zilandelayo xa usenza isigqibo malunga ne-thumbnail yesiko:
Faka isibindi: Ukhuphisana nababukeli, ke kuya kufuneka ubonakale phakathi kwezinye izithonjana kwiYouTube nakwiwebhu. Umahluko wemibala kunye nomgangatho womfanekiso kunye nomba wokuyilwa kokubonwayo.
Yongeza isimntwiso: Bonisa ukujonga okufutshane kobuso, ukuba kunokwenzeka. Ababukeli bacofa ebusweni ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into.
Lwela ukuchaneka: I-thumbnail kufuneka ihambelane nomxholo wevidiyo. Sukusebenzisa i-thumbnail njengendlela yokukhohlisa ababukeli ukuba bajonge ividiyo yakho.
Dibana nokubalulwa kobuchwephesha: Umfanekiso kufuneka ube ziiphikseli eziyi-1280 × 720 kwaye ungabi mkhulu kune-2MB.
Yongeza uphawu: Ababukeli abanokujonga kwisithonjana sakho ngaphezulu kwemizuzwana embalwa; ukongeza uphawu yindlela entle yokwazisa ngokukhawuleza abantu ukuba ungubani. Kwaye ukudibanisa iividiyo zakho ngokungaguqukiyo kwenza ukuba kujongwe ngokudibeneyo kwisitishi sakho.
Ngaba ufuna ukufunda okungakumbi? Jonga ezi ngcebiso zokuphucula indawo yokukhangela ku-YouTube.
Unyango lwe-hartz ultraguard lwendlebe lwezinja
Kwenzeka ntoni ukuba uthobisa i-aspirin
I-coupon yesilingo yasimahla
Iziphumo ebezingalindelekanga zokugonya i-meningococcal b
Ukusebenzisana kwe-ibuprofen kunye notywala
Ungayitshisa njani i-cd kwi-itunes